Foam Casting ၀ န်ဆောင်မှုများနှင့်အစိတ်အပိုင်းများဆုံးရှုံးခြင်း - China Solid Casting ထုတ်လုပ်သူနှင့်ပေးသွင်းသူ - Minghe Casting
ဆုံးရှုံးသွားသောမြှုပ် Casting ကဘာလဲ
မြှုပ် Casting ဆုံးရှုံးခဲ့ရသည် (စအဖြစ်လူသိများ အစိုင်အခဲ Casting) အရွယ်အစားနှင့်ပုံသဏ္inာန်ဆင်တူ paraffin ဖယောင်းသို့မဟုတ်မြှုပ်မော်ဒယ်များကိုစုစည်းရန်သတ္တုများနှင့်အတူတူဖြစ်သည်။ ဆန့်ကျင်ဘက်ဖြစ်သောသုတ်ဆေးများကိုဆေးကြောပြီးနောက်ခြောက်သွေ့သောအခါသွပ်သွေ့ခြောက်သောနေရာတွင်တုန်ခါမှုပုံစံပြုလုပ်ရန်သဲမြေ၌မြှုပ်နှံထားသည်။ ၎င်းသည်မော်ဒယ်ကို gasify ဖြစ်စေသည်၊ သတ္တုအရည်သည်မော်ဒယ်၏အနေအထားကိုယူပြီးသတ္တုစပ်ပုံသဏ္newာန်အသစ်တစ်ခုဖြစ်ပေါ်စေရန်ခဲယဉ်းခြင်းနှင့်အေးစေသည်။
သကြားခြောက်သွေ့သောသဲများသွန်းလောင်းနေစဉ်သွပ်ခဲနေသောကြောင့် ၁၉၆၇ ခုနှစ်တွင်ဂျာမနီမှအေဝစ်တီမိုဆပ်စ်က "သံလိုက်သတ္တုများပုံသွန်းလောင်းခြင်း" ကိုစတင်ခဲ့သည်။ ဒီအားဖြင့်မှုတ်သွင်းလိုက်သောဒီနေ့ရေမြှုပ်ပုံသွန်းလောင်းခြင်းသည်နေရာများစွာတွင်သဲများကိုပြင်ဆင်ရန်လေဟာနယ်ကိုအသုံးပြုသည်။ ထို့ကြောင့်လွန်ခဲ့သောအနှစ် ၂၀ အတွင်းကမ္ဘာတစ်ဝှမ်းလုံး၌အမြှုပ်များသွန်းလောင်းသောနည်းပညာသည်လျင်မြန်စွာတိုးတက်လာခဲ့သည်။
ဆုံးရှုံးသွားသောမြှုပ် Casting ၏အားသာချက်များ
1. မြင့်မားသောသတ္တုများပုံသွန်း Precision
ဆုံးရှုံးသွားသောအမြှုပ်ပုံသွန်းလောင်းလုနီးပါးအဘယ်သူမျှမအနားသတ်နှင့်တိကျသောမှိုနှင့်အတူအသစ်တစ်ခုဖြစ်စဉ်ကိုဖြစ်ပါတယ်။ ဤလုပ်ငန်းစဉ်မှိုမှိုယူခြင်း၊ မျက်နှာပြင်မျက်နှာပြင်မရှိခြင်း၊ သဲမဏ္coreိုင်မရှိခြင်းတို့ကြောင့်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းတွင် Flash၊ Burr နှင့်မူကြမ်းထောင့်မရှိခြင်းနှင့်အဓိကပေါင်းစပ်ခြင်းကြောင့်ဖြစ်ပေါ်လာသောအရွယ်အစားအမှား။ သတ္တုများပုံသွန်းသည့်ပုံ၏မျက်နှာပြင်ကြမ်းတမ်းမှုသည် Ra3.2 သို့ ၁၂.၅μm အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ သတ္တုများပုံသွန်းလောင်းခြင်း၏အရွယ်အစားတိကျမှုသည် CT12.5 သို့ ၉ အထိရောက်ရှိနိုင်သည်။ စက်၏စရိတ်သည် ၁.၅ မှ ၂ မီလီမီတာအထိရှိပြီး၎င်းသည်စက်၏ကုန်ကျစရိတ်ကိုများစွာလျှော့ချနိုင်သည်။ အစဉ်အလာသဲသောင်လုပ်နည်းနှင့်နှိုင်းယှဉ်ပါက၎င်းကိုစက်၏အချိန် ၄၀% မှ ၅၀% အထိလျှော့ချနိုင်သည်။
၎င်းသည်သတ္တုများပုံသွန်းသောဖွဲ့စည်းပုံ၏ဒီဇိုင်းအတွက်လုံလောက်သောလွတ်လပ်မှုကိုပေးသည်။ အလွန်ရှုပ်ထွေးသောသတ္တုများသွန်းလောင်းနိုင်သည့်အမြှုပ်များကိုပလတ်စတစ်မှိုများဖြင့်ပေါင်းစပ်နိုင်သည်။ ၎င်းသည်ကြီးမားသောသတ္တုများသွန်းလောင်းရန်၊ စက်တပ်ဆင်ထားရန်အတွက်သာမကသေးငယ်သည့်သုတ်ဆေးထုတ်ကုန်များ၏ manual splicing models အတွက်လည်းသင့်တော်သည်။
ရိုးရာသတ္တုများပုံသွန်းအတွက် 3. အဘယ်သူမျှမသဲ Core
ထို့ကြောင့်သဲအမာခံ၏တိကျသောအရွယ်အစားသို့မဟုတ်ရိုးရာသဲ Casting အတွက်အနိမ့် core ကို၏တိအနေအထားကြောင့်ဖြစ်ရတဲ့သတ္တုများပုံသွန်း၏မညီမျှမှုမြို့ရိုးအထူရှိလိမ့်မည်။
ပုံသွင်းသဲတွင်ဓာတုဗေဒဆိုင်ရာပေါင်းစပ်ပါဝင်ခြင်းမရှိပါ။ အမြှုပ်ပလပ်စတစ်သည်အပူချိန်နိမ့်သောပတ်ဝန်းကျင်တွင်ပတ်ဝန်းကျင်ကိုအန္တရာယ်ဖြစ်စေနိုင်ပြီးသဲအဟောင်းပြန်လည်ထူထောင်မှုနှုန်းမှာ ၉၅% ကျော်ရှိသည်။
Casting blank ၏အလေးချိန်ကိုလျှော့ချပြီးစက်ပစ္စည်းပမာဏသည်သေးငယ်သည်။ သဲခြောက်ထားသောသင်္ဂြိုဟ်သည့်ပုံစံကိုစက်မှုစွန့်ပစ်ပစ္စည်းနည်းပါးသော၊ အနံမရှိသော၊ သန့်ရှင်းရေးအချိန်ကို ၈၀% ကျော်လျှော့ချ။ ကုန်ကျစရိတ်ကိုသိသိသာသာလျှော့ချနိုင်သည်။
Applications ကို၏ 6.Wide Range
၎င်းသည်သံ၊ ကွေးနိုင်သောသံသာမကတစ်ချိန်တည်းတွင်သံမဏိများကိုလည်းပြုလုပ်နိုင်သဖြင့်လွှဲပြောင်းပြောင်းလွယ်ပြင်လွယ်ရှိပြီးကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသည်။ ၎င်းသည်အသေးစားနှင့်အလတ်စားအစိတ်အပိုင်းများအတွက်သာမကစက်ကိရိယာများ၊ အကြီးစားပိုက်တပ်ဆင်ခြင်း၊ အကြီးစားအအေးမှိုအစိတ်အပိုင်းများ၊ အကြီးစားသတ္တုတွင်းစက်ကိရိယာများစသည့်အကြီးစားသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းအတွက်လည်းသင့်တော်သည်။
ဆုံးရှုံးသွားသောမြှုပ်သတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်သည်အခြားသတ္တုများပုံသွန်းခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်များနှင့်အတူတူပင်ဖြစ်ပြီး၎င်း၏ချို့ယွင်းချက်များနှင့်ကန့်သတ်ချက်များရှိသည်။ Castings အားလုံးသည်ဆုံးရှုံးသွားသော foam process ကို အသုံးပြု၍ ထုတ်လုပ်ရန်မသင့်တော်သောကြောင့်တိကျသောခွဲခြမ်းစိတ်ဖြာမှုလိုအပ်သည်။ အဓိကအားဖြင့်ဤလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးပြုရန်ရှိမရှိစဉ်းစားရန်အောက်ပါအချက်များအပေါ်အခြေခံသည်။
- ပုံသွန်းခြင်းအသုတ်လိုက်အရွယ်အစား - အသုတ်အရွယ်အစားကြီးလေစီးပွားရေးအကျိုးအမြတ်များလေလေဖြစ်သည်။
- သတ္တုများပုံသွန်းပစ္စည်း - ကောင်းသောအသုံးချနိုင်မှုနှင့်အသုံးချမှုညံ့ဖျင်းမှုမှာအကြမ်းဖျင်းဖြစ်သည်။ မီးခိုးရောင်သွပ် - မဟုတ်သော ferrous သတ္တုစပ် - သာမန်ကာဗွန်သံမဏိ - ပြွန်သံ - အနိမ့်ကာဗွန်သံမဏိနှင့်အလွိုင်းသံမဏိ; ဖြစ်စဉ်ကိုစမ်းသပ်မှုများမဖြစ်စေရန်အတွက်လိုအပ်သောကြိုတင်ပြင်ဆင်မှုများကိုဖြတ်သန်းပါ။ debugging သည်အလွန်ရှည်လျားသည်။
- Casting size - အဓိကအားဖြင့်သက်ဆိုင်ရာပစ္စည်းကိရိယာများ (တုန်ခါနေသောစားပွဲ၊ သဲသေတ္တာကဲ့သို့) ကိုအဓိကစဉ်းစားပါ။
- Casting structure: သတ္တုစပ်ပုံသွင်ပြင်ပိုမိုရှုပ်ထွေးလေလေယင်းသည်အမြှုပ်သွန်းခြင်းဖြစ်စဉ်၏ဆုံးရှုံးမှု၏သာလွန်မှုနှင့်စီးပွားရေးအကျိုးကျေးဇူးများကိုထင်ဟပ်နိုင်လေဖြစ်သည်။ ကျဉ်းမြောင်းသောအတွင်းပိုင်းလိုင်ချန်နယ်များနှင့် interlayers နှင့်အတူဖွဲ့စည်းပုံအတွက်ကြောင့်ဆုံးရှုံးမှုမြှုပ်လုပ်ငန်းစဉ်ကိုအသုံးမပြုမီကြိုတင်စမ်းသပ်ချက်လုပ်ဆောင်သွားရန်လိုအပ်သည်။ ဟင်းသီးဟင်းရွက်။
၁၉၉၅ ခုနှစ်တွင်စတင်တည်ထောင်ခဲ့သော China Minghe Casting သည်စက်မှုလုပ်ငန်းစံသတ်မှတ်ချက်ပုံစံတစ်ခုဖြစ်ပြီးပျောက်သွားသောအမြှုပ်များသုတ်ရန်အတွက်ပုံစံကိုပုံသွင်းသည်။ Minghe သည်ကမ္ဘာ့စက်မှုမြို့တော် Dongguan တွင်တည်ရှိသည်။ ၎င်းသည် Guangdong ပြည်နယ်ရှိအဆင့်မြင့်နည်းပညာလုပ်ငန်းတစ်ခုဖြစ်သည်။ ၎င်းတွင်ဆောက်လုပ်ရေးareaရိယာ ၁၈၀၀၀ စတုရန်းမီတာရှိသောထုတ်လုပ်မှုအလုပ်ရုံတစ်ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်သုတေသနနှင့်ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှု၊ ဒီဇိုင်း၊ ပုံသွန်းခြင်း၊ စက်တပ်ခြင်း၊ ၎င်းသည် Dongguan R&D စင်တာနှင့်နည်းပညာစင်တာဖြစ်သည်။ Minghe Casting တွင်ယခုအခါတီထွင်မှုမူပိုင်ခွင့် (၆) ခုနှင့်အသုံး ၀ င်သောမူပိုင်ခွင့် (၂၀) ​​ခုရှိသည်။ ၎င်းသည်ဂွမ်ဒေါင်းပြည်နယ်ရှိကုန်အမှတ်တံဆိပ်လုပ်ငန်းဖြစ်သည်။ ကုမ္ပဏီတွင် ၀ န်ထမ်း ၂၃၀ ကျော်ရှိပြီး၊ ဒီဇိုင်းအင်ဂျင်နီယာ ၃၆ ခုနှင့်ပညာရှင် ၃၉ ဦး၊ ၎င်းတွင် CNC ပြုပြင်သည့်စက်ကိရိယာ ၄၀ နှင့်အထွေထွေပြုပြင်ထုတ်လုပ်သည့်စက်ကိရိယာများရှိသည်။ 1995 ယူနစ်, 18,000 သြဒိနိတ်တိုင်းတာစက်နှင့်6ပြောင်းပြန်စကင်နာ။ Minghe Casting နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသောကွန်ပျူတာသုံးဖက်မြင်ဒီဇိုင်း၊ ပရိုဂရမ်းမင်း၊ ကွန်ပျူတာဖြင့်ကူညီသည့်အပြောင်းအလဲနည်းပညာ၊ FM သတ္တုဖြင့်ပြုလုပ်ထားသောအလူမီနီယံမှိုကွက်များကို အသုံးပြု၍ Minghe Casting နှင့်ပေါင်းစပ်ထားသော TEFLON (TEFLON) မျက်နှာပြင်ဖုံးအုပ်မှုနည်းပညာနှင့်လက်အောက်ခံ Minghe Powder Coating Factory သည်မှိုအရည်အသွေး၊ တိကျမှု၊ ထိရောက်မှု၊ ၀ န်ဆောင်မှုသက်တမ်းသည်ဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်များကိုဖြည့်ဆည်းပေးနိုင်သည်။ ကုမ္ပဏီ၏နည်းပညာပိုင်းဆိုင်ရာ ၀ န်ထမ်းများသည်မှိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ အသုံးပြုခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းထုတ်လုပ်ခြင်း၊ အခမဲ့ပြုပြင်ထိန်းသိမ်းမှုကိုလမ်းပြပေးပြီးဖောက်သည်များ၏လိုအပ်ချက်အရအမြှေးပါးသတ္တုများထုတ်လုပ်ခြင်းနည်းပညာကိုအပြည့်အဝပေးနိုင်သည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးရှုံးသွားသောမြှုပ် Casting စိတ်ကြိုက်လုပ်ငန်းစဉ်
Minghe Casting သည်ဆုံးရှုံးသွားသောအမြှေးများသွန်းလောင်းခြင်းအတွက်ပုံသွင်းသောပုံစံပုံစံ၏ဒီဇိုင်းယူနစ်တစ်ခုဖြစ်ပြီးကျယ်ပြန့်စွာအသုံးပြုသောမှိုများကိုထုတ်လုပ်သည်။ နှစ်ပေါင်းများစွာဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်မှုနှင့်ဆန်းသစ်တီထွင်မှုများအပြီးတွင် Minghe Casting သည်ဆုံးရှုံးသွားသောအမြှုပ်ပုံသွန်းလောင်းသောကုမ္ပဏီများအတွက်ပုံသွင်းပေးသည့်ကုမ္ပဏီဖြစ်လာသည်။ ပျောက်ဆုံးသွားသော Foam Casting များကိုစိတ်ကြိုက်ပြုပြင်ခြင်းလုပ်ငန်းစဉ်ကိုအောက်ပါအတိုင်းအကျဉ်းချုပ်ဖော်ပြနိုင်သည် -
- ဖောက်သည်များနှင့်ညှိနှိုင်းတိုင်ပင်ခြင်း - လျှော့စျေးအတွက်ကျွန်ုပ်တို့ကိုဆက်သွယ်ပါ။
- ထုတ်လုပ်မှုစီမံကိန်း။ ။ သင်အတွက်ပုံသေအံဝင်ခွင်ကျဖြစ်အောင်လုပ်ပါလိမ့်မည်။
- အစီအစဉ်ပြန်လည်သုံးသပ်ခြင်း - အစီအစဉ်ကိုကျွမ်းကျင်သောအင်ဂျင်နီယာများကတင်းကြပ်စွာပြန်လည်သုံးသပ်ပါမည်။
- သဘောတူစာချုပ်ကိုလက်မှတ်ထိုးပါ။ ပူးပေါင်းဆောင်ရွက်ရေးသဘောတူညီချက်ကိုလက်မှတ်ရေးထိုးပြီးသင့်အတွက်ထုတ်ကုန်များကိုစတင်ပြင်ဆင်ပါ။
- မှိုဒီဇိုင်း - 3D ဒီဇိုင်းနှင့်အစိတ်အပိုင်းများကိုဂရပ်ဖစ်စစ်ဆေးခြင်း။
- CNC စက်: အလူမီနီယံမှိုကွက်လပ်၏ CNC စက်။
- တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်း - မှိုတပ်ဆင်ခြင်း၊ စမ်းသပ်ခြင်းနှင့်စမ်းသပ်ခြင်းသည်အရည်အချင်းစံနှုန်းများနှင့်ကိုက်ညီသည်။
- စာမေးပွဲအောင်ပါ။ ထုတ်ကုန်တွင်ပြproblemsနာမရှိပါကစစ်ဆေးပါ။
- Coating treatment: ထိုအခါမှိုမျက်နှာပြင်၏အပေါ်ယံပိုင်းကုသမှုကိုလုပ်ဆောင်ပါ။
- စက်ရုံစစ်ဆေးခြင်း - စက်ရုံစစ်ဆေးခြင်းအပြင်ကုန်ပစ္စည်းထုပ်ပိုးခြင်းနှင့်သင့်ထံပေးပို့ခြင်း။
- တပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်ခြင်းများ။ မှိုတပ်ဆင်ခြင်းနှင့်ဖြုတ်ထုတ်ခြင်းနှင့် ၀ န်ဆောင်မှုများလွှဲပြောင်းပေးခြင်းလုပ်ငန်း။
ပျောက်ဆုံးသွားသော Foam Casting အမျိုးအစားများထုတ်လုပ်မှုအခြေအနေ
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ဇာတ်ကြောင်းပျောက်ဆုံးသွားသောမြှုပ် Casting1 ▶
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ဇာတ်ကြောင်းပျောက်ဆုံးသွားသောမြှုပ် Casting2 ▶
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ဇာတ်ကြောင်းပျောက်ဆုံးသွားသောမြှုပ် Casting3 ▶
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ဇာတ်ကြောင်းပျောက်ဆုံးသွားသောမြှုပ် Casting7 ▶
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ဇာတ်ကြောင်းပျောက်ဆုံးသွားသောမြှုပ် Casting9 ▶
ကုန်ထုတ်လုပ်မှု၏ဇာတ်ကြောင်းပျောက်ဆုံးသွားသောမြှုပ် Casting11 ▶
ပျောက်ဆုံးသွားသော Foam Casting ၏ Minghe ဖြစ်ရပ်မှန်လေ့လာမှုများ
အကောင်းဆုံးပျောက်ဆုံးသွားသောမြှုပ် Casting ပေးသူကိုရွေးချယ်ပါ
လက်ရှိ၊ ကျွန်ုပ်တို့၏ဆုံးရှုံးသွားသောအမြှုပ်သွန်းပစ္စည်းများကိုအမေရိက၊ ကနေဒါ၊ သြစတြေးလျ၊ ယူနိုက်တက်ကင်းဒမ်း၊ ဂျာမနီ၊ ပြင်သစ်၊ Sout Africa နှင့်ကမ္ဘာတစ်လွှားရှိအခြားနိုင်ငံများသို့တင်ပို့သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည် ISO9001-2015 မှတ်ပုံတင်ထားပြီး SGS မှအသိအမှတ်ပြုပါသည်။
ကျွန်ုပ်တို့၏ထုံးစံပျောက်သွားသည့်အမြှုပ်သွန်းလောင်းခြင်းလုပ်ငန်းသည်ကား၊ ဆေး၊ လေ၊ အာကာသ၊ လျှပ်စစ်ပစ္စည်းများ၊ အစားအစာ၊ ဆောက်လုပ်ရေး၊ လုံခြုံရေး၊ အချိန်တိုအတွင်းမှာအခမဲ့ကိုးကားရန်သင်၏မေးမြန်းမှုကိုပေးပို့ရန်သို့မဟုတ်သင်၏ပုံဆွဲခြင်းကိုမြန်မြန်ပို့ပေးပါ။ ကျွန်ုပ်တို့သို့မဟုတ်ဆက်သွယ်ရန်အီးမေးလ် sales@hmminghe.com ကျွန်ုပ်တို့၏လူများ၊ ပစ္စည်းကိရိယာများနှင့်ကိရိယာတန်ဆာပလာများသည်သင်၏ပျောက်သွားသောအမြှုပ်များထုတ်လုပ်ခြင်းအတွက်အကောင်းဆုံးစျေးနှုန်းအတွက်အကောင်းဆုံးအရည်အသွေးကိုမည်သို့ဆောင်ကြဉ်းပေးနိုင်သည်ကိုကြည့်ရန်။